SARIPIKA: Mizaha Vorona any Atsimon’i Philippines · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2014 3:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, বাংলা, Aymara, 繁體中文, 简体中文, Français, 日本語, Italiano, Deutsch, English
Misy 600 mahery ny karazam-borona ao amin'ny nosy miisa 7000 an'i Philippines izay midika fa betsaka ny fotoana ahafahana mijery ny hakanton'ireo zavaboary manidina ireo. Fanampin'izany, mety ahitana vorona mpifindramonina ihany koa amin'ireo vondro-nosy izay andalovan'ny lalam-pisidinana mampitohy an'i Azia sy Pasifika. Saingy mampalahelo, ahiana ho potiky ny tetikasam-pampandrosoana mihetaketaka sy ny fahapotehan'ny tontolo voajanahary ny fonenam-borona.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, lasa mihoatra noho ny fanalan'andro manerana ny firenena omanin'ny mpankafy sy ny manampahaizana ny fizaham-borona. Navitrika tamin'ny fisoloambava ho fiarovana ny tontolo masin'ny vorona ankoatra ny fanentanana fanairana momba ny fiainan'ny vorona mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa ny “Birders” (mpankafy vorona).
Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahatontosa soa aman-tsara ny fetiben'ny vorona tao an-tanànan'i Zamboanga, miorina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy Mindanao ny Club-n'ny voromanidina ao Phillipines. Mety ho malaza ho tanàna mampididoza i Zamboanga (malaza tamin'ny vaovao tamin'ny herintaona nanafihan'ny mpioko mitam-piadiana tanàna ambanivohitra maro sy nakan'izy ireo takalon'aina izy), saingy fonenam-borona anjatony ihany koa, ka ao anatin'izany ny vorona mpifindramonina toy ny sidintsidin'i Pasifika.
Nanoratra momba ny karazam-boromanidina tsy fahita firy tao Zamboanga ny iray amin'ny mpanomana ny fetibe antsoina hoe :
Ravoravo ihany koa izy mahita akanim-boropotsy (voronomby) lehibe, zavatra tsy dia fahita loatra ao amin'ny firenena:
Angela, iray amin'ireo delegasionan'ny fetiben'ny vorona, nizara video (lahatsary) Facebook-n'ny voromaherim-bibilava hitany tao amin'ny dobo Intake ao Zamboanga.